SHIR LOOGA HADLAAYEY ARIMAHA SOMALIA OO KA DHACAY PRETORIA EE DALKA SOUTH AFRICA. | Toggaherer's Weblog
Pretoria 22 Jan 2009 ToggaHerer
Waxaa Maanta Magaalada Pretoria ee Xarunta Dalka Koonfur Ka dhacay kulan looga hadlayay Xaalada amaan ee dalka Soomaaliya iyo sidii Xal waara loogu heli lahaa Dhamaanba mushkilada ka taagan Soomaaliya.
Shirkani oo ahaa midkii ugu horeyey ee looga hadlo arimaha soomaaliya kana dhaca dalkaani koonfur afrika ayaa soo qaban qaabisey hay ad lagu Magacaabo ISS ( Intstitute For Security Studies) oo iyadu ka shaqeysa arimaha nabad galyada waxna ka diyaarisa arimahaasi ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka soca ururrada Bulshada ee dalkaani koonfur afrika, sidoo kale marti sharaf ayaa lagu casuumay kulankaan iyo aqoonyahano Soomaaliyeed oo qurba joog ah iyo kuwo Soomaaliya ka yimid.
Furitaankii shirka ayaa waxaa ka hadlay mas’uuliyiin ka tirsan Hay addaha kala ah Institute For Security Studies (ISS) oo ah hay adda kulankaani soo qabanqaabisey iyo Hay’adda Caalamiga ah ee Interpeace, Hay’adda Cilmi Baarista iyo Wadatashiga CRD iyo Jamacada Davidson iyo jamacada kale University Of Georgia Iyo Jaaliyada Soomaalida ee koonfur afrika ,oo si qoto dheer uga hadlay xal u helida Mushkiladda Soomaaliya.
Ugu horeyn waxaa furitaanka ka hadlay Ms. Paula Roque oo ka socotey kuna hadlaysey Magaca ISS ayaa waxay ka qeybgalayaasha shirka uga mahadceliyay waqtiga ay u soo hureen in ay ka soo qeybgalaan shirka looga hadlayo Xaalada Soomaaliya, sidoo kalena waxay u mahadceliya Hay’adda Cilmi Baarista iyo Wadatashiga CRD, midaasi oo ay ku sheegtey inay aad ugu faraxsanyihiin inay maanta kulankaani ka soo qaybgaleen khuburo ku xeel dheer arimaha nabad galyada ee geeska afrika gaar ahaan soomaaliya.
Intaas kadib waxaa sidoo kale ka hadlay Mr Ken Menkhaus oo ka sacdey Jamacada Davidson Universtiy ee ku taala dalka maraykanka waxaana uu si aad u qoto dheer uga hadalay mushkilada soomaaliya haysata iyo sida ay xal waarta ku gaari karto waxaana ka mid ahaa hadaladiisii ” In Kulankaani looga hadlayo nabadeynta Soomaaliya uu yahay mid u muhiim ah dadka Soomaaliyeed oo iyagu leh talada xal ka gaarista mushkiladda Soomaaliya, wuxuuna intaas uu ku daray in Dadka Soomaaliyeed ay gaareen meeshii ugu dambeysay, isla markaana marka laga hadlayo laga soo qaato sawir aan wanaagsaneyn”.
Waxaa kale u ka sheegey Kulanka ” Aniga hadda waxaan ka imid oo aan deganahay Dalka Maraykanka, Mahan inay dadku is dhahaan beesha Caalamka ayaa idinka aamusan ama idinku dhax jirta soomaalidu way inay iyadu isku tashataa xal waarana keensataa , marka waxaa loo baahan yahay in ay dadka Soomaaliyeed ka tashadaan sidii meesha looga saari lahaa qalalaasaha iyo dhibaadata dalka iyo dadkuba saamaysey ee ku habsatey dalka soomaaliya”.
Khudbad dheer oo uu ka jeediyey madasha shirka Xubin ka Socota Hay’adda Interpeace oo lagu Magacaabo Cabdi raxmaan Raage ayaa ahayd mid aad dadku madax ugu ruxeen soona jeedatay xubnihii madasha waxaana uu aad uga hadlay arimaha hada ka taagan Soomaaliya iyo urur diimeedyada hada ka taliya iyo shirka dib u hashiisiinta Soomaaliya oo la filaayo inuu mar dhaw ay dawalad loo dhan yahay uga dhawaaqaan dalka Jabuuti Caasimadiisa Jabuuti.
Waxaa kale oo ka hadalay Agaasimaha Hay’adda Cilmi Baarista iyo Wada-tashiga CRD Jabriil Ibraahim Cabdulle oo soo jeediyay khudbad soo koobeysay dhibaatada ka jirta Soomaaliya, taasi oo ku saabsaneyd warbixinno laga sameeyay Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed oo dhinac walba leh.
Waxaana ka mid ahaa hadaladii uu kulanka ka jeediyey ” Bulshada Caalamku way u jeedaa halka ay maanta taagan tahay xaaladda Soomaaliya, marka suurtagal miyaa inay beesha Caalamku nagu eegato sidaa aan nahay mise, waxay ila tahay in loo baahan yahay in la jiheeyo nabadeynta Soomaaliya”, ayuu yiri Jabriil Ibraahim Cabdulle.
Waxaa isna meesha ka hadlay Qunsulka dawlada Itoopiye u fadhiya Dalkaani Koonfur Afrika oo meesha markuu hadlay ay jawaabo kul-kulul ka dhasheen. Wuxuu kulanka ka sheegey inaysan dawladiisu ahayn mid Gumeysi ahaan u soo gashey ee ahayd mid Cawimaad u fidineysey Dadka Iyo Dawlada Soomaaliiyeed midaas oo ay ka codsatey dawlada soomaaliyeed iyo shacabkeeda oo is wata, isagoo hadalkiisa ku daray hormarka ay ka qabatey gudaha Soomaaliya iyo dib u hashiisiintii ay ka dhaxwadey inay tahay mid guul u ah dawlada itoobiye, isagoo meesha ka saaray inay wax gumaad ah ka gaysteen gudaha dalka soomaaliya kaliya uun inay naftooda difaacayaan.
Sidoo kale waxaa hadalka qunsulka jawaab kooban siiyey Agaasimaha Guud ee Jaaliyada Soomaaliyeed ee koonfur afrika (SASA) Mudane Axmed Dawlo oo yiri ” Nasiib daro hadalka Qunsulka Ethiopia waa mid dhagaystayaasha habaabinaya. Dawlada itoobiya kuma soo galin Gudaha Dalka Soomaaliya Casuumaad ay ka heshey shacabka Soomaaliyeed.
Qaraarka UN ka ee 1725 wuxuu xataa diidayaa in Ethiopia iyo Kenya ay ciidamo nabad ilaalin ah ugu deeqaan AMISOM sababtoo ah dano gaar ah ayay ka leeyihiin dalka. Marka Ethiopia ma saacidayso Soomaalida ee iyada ayaa qandaraas ka qaadatay George Bush.
Waxaa kale oo uu ka hadlay Mudane Dawlo shirka Jabuuti oo uu yiri “Wax way ka soo baxayaan laakiin ma aha dhamaadkii qalalaasaha maadaama oo xoogaga Muqaawamadu ayna ka wada qayb galaynin” ,Wuxuu Dawlo si kulul u canbaareeyay qaraarka Maraykanku uu qaar Muqaawamada ka mid ah ugu daray liiska “Argagaxisada” oo uu ku sheegay in khalad tahay.
Dadkii kulanka ka soo qaybgalay oo aad u tiro badnaa badankooduna ahaa dad u dhuun doleela arimaha soomaaliya iyo safaradaha wadamada ajaanibta ay ku leeyihiin dadlkaan kuunfur afrika oo dhamaantood isku raacey inay soomaaliya xiligaan u baahantahay gacanta beesha caalamka iyo gargaar bin aadinimo.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii fikirkooda meesha ka dhiibtey Cabirahmaan Caateeye oo ah nin aqoonyahan soomaaliyeed oo wax ka barta dalkaani koonfur afrika ayaa kulanka ka sheegey inay soomaaliya xal u noqon karto hadi ay isticmaasho ama aysamaysato maamul gobaleedyo sida soomaali land iyo puntland oo kale, Isagoo daliil ka dhigayna waxa ay qabatey dawlad gobaleedka soomaaliland ayna maanta haboontahay in la aqoonsado soomaaliland ayuu yiri Mr cateeye.
Ugu dambeyntiina waxaa meesha ka hadlay Mr.Richard Cornwell oo ka mid ah hay adda ISS waxaa uuna ka sheegey kulanka in Bulshada Soomaaliyeed ay laf dhabar u yihiin isbedel ku yimaada Arrimaha Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii ” Ururada Bulshada aqoonyanada Soomaaliyeed mar kasta waxay cod cad oo aan qarsooneen u yihiin inta badan ee aan codka lahayn sida Caruurta, Haweenka, Dadka Waayeelka ah.
Waxaana ka mid ahaa hadaladiisii ” Aniga waxaan aaminsanahay in xal u helidda mushkiladda Soomaaliya ay qeyb ku leeyihiin Ganacsatada iyo Warbaahinta, waxayna qeyb ka qaadan karaan sidii arrintaas loo fulin lahaa” sidoo kale waxaa uu ku daray hadalkiisa in xal siyaasadeed oo la gaaro ay qeyb muhiim ah ka qaadanayaan soo afjaridda Mushkiladda Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisii ku soo gabagabeeyey in Beesha Caalamku in ay sii wadi doonto la shaqeynta qeybaha kala duwan ee Ururrada Bulshada iyo aqoonyahanadaSoomaaliyeed, waxaana rajeynayaa ayuu yiri in maalin uun guul laga gaari doono hadi la badiyo wadatashiga bulshada iyo aqoonyahanada Soomaaliyieed.
Si kastaba ha ahaatee kulankaan ayaa ahaa midkii ugu horeyey oo noociisa oo kale ah oo lagu qabto wadankaani koonfur afrika iyadoo lagu Casuumey inay ka soo qaybgaleen aqoonyahano soomaaliyeed iyo kuwo ku xeel dheer arimaha soomaaliya iyo wadamada aadka u daneyna arimaha soomaaliya, ayaa waxaa lagu balamay in la sii wado kulamada noocaan oo kale ah ee looga hadlayo arimaha nabada ee geeska afrika gaar ahaan arimaha soomaaliya, dadkii kulanka isugu yimid ayaa soo jeediyey in la sii wado kulamo noocan oo kale ah oo ka dhaca dunida Daafaheeda iyadoo waliba laga soo qaybgalinayo aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool aduunka dacaladiisa iyo inta danayneysa arimaha Soomaaliya.